नम्डा मोबाइल एक्स्पो २०१६ - प्रदर्शनी - साप्ताहिक
नम्डा मोबाइल एक्स्पो २०१६
पु.स १४ देखि १८ गतेसम्म नम्डा मोबाइल एक्स्पो–२०१६ को आयोजना हुने भएको छ । नेपाल मोबाइल वितरक संघले आयोजना गर्न लागेको नम्डा मोबाइल एक्स्पो सबै मोबाइल फोनका उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, खुद्रा विक्रेता एवं अन्य सेवाप्रदायक सबैलाई एउटै छातामुनि ल्याउने उद्देश्यले गर्न लागिएको हो ।
भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुन लागेको यो एक्स्पोमा नेपाल तथा विदेशका सेवाप्रदायक तथा उत्पादन कम्पनीहरूले अत्याधुनिक उत्पादन तथा प्रविधिको परिचय गराउने एक्स्पो आयोजक संघका महासचिव रघु त्रिपाठीले बताए । मोबाइल फोन कम्पनीका नयाँ उत्पादनको परिचय, कम्पनीद्वारा सेवाप्रदायक तथा ग्राहकबीच अन्तक्र्रिया, ग्राहकलाई विविध प्रकारको फोनको छनोटमा व्यापक अवसर आदि प्रदर्शनीका मुख्य आकर्षण हुने त्रिपाठीले बताए । एक्स्पोमा मूल्य समायोजन एवं व्यापार प्रवद्र्धनका साथ आगन्तुकहरूलाई आकर्षक उपहारसमेत प्रदान गरिनेछ ।
उक्त प्रदर्शनी २ लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने आयोजक संस्थाको अपेक्षा छ । नयाँ प्रविधि, रमाइला गेम, उपयोगी एप्लिकेसनसहितको यो एक्स्पो मोबाइल पारखीहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्नेछ । प्रदर्शनीमा १ सय ३० वटा स्टल रहनेछन्, जसमध्ये १७ वटा मुख्य हलभित्र हुनेछन् । मोबाइल आयातकर्ताहरूले आ–आफ्ना ब्रान्डको परिचय गराउनुका साथै अन्य रिटेल स्टलहरूले मुख्य हलको बाहिर रहेर आकर्षक सेवा प्रदान गरिने एक्स्पो मूलसमारोह समितिका संयोजक दिनेश चुल्याध्योले बताए ।
एक्स्पो अवधिभर मोबाइल आयातकर्ताले विभिन्न प्रोमोसनल गतिविधि सञ्चालन गर्नेछन् । मोबाइल वितरकहरूले ग्राहकहरूका लागि छुट्टै सूचना कक्ष राखी उपयोगी एप्लिकेसनहरूको जानकारी गराउनेछन् । यसका साथै रिटेलरका लागि समेत विशेष सेवा सञ्चालन गरिनेछ । त्यस्तै रिटेलर व्यवसायीका स्टलबाट मात्र मोबाइल बिक्री गरिनेछ । नेपाल मोबाइल वितरक संघमार्फत नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक मोबाइल उत्पादक कम्पनी, मोबाइल आयातकर्ता, मोबाइल वितरक तथा रिटेलरहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर यो मोबाइल एक्स्पो सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा मोबाइल फोन सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन यस्ता एक्स्पोले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा पशुपति ट्रेडलिंकका नेसनल सेल्स म्यानेजर भूपाल क्षेत्री बताउँछन् । ‘इम्पोर्टरहरूका तर्फबाट उक्त एक्स्पोलाई सफल पार्न हामी अधिकतम प्रयास गर्नेछौं ।’ इम्पोर्टर कम्पनीका तर्फबाट क्षेत्रीले भने, ‘मोबाइल एक्स्पोका नाममा विगतमा केही व्यक्तिविशेषले सीमित क्षेत्रका केही मोबाइल व्यवसायीलाई मात्र समेटेर मेला सञ्चालन गरे । हामी त्यो परम्परा भत्काउँदैछौं ।’
यसपटक काठमाडौं, भक्तपुर तथा ललितपुर क्षेत्रका खुद्रा मोबाइल व्यवसायीलाई समेटेर मोबाइल एक्स्पो आयोजना हुने भएकाले यो एक्स्पोले सबै मोबाइल व्यवसायीको हित गर्ने आयोजकहरूको दाबी छ । इन्ट्रोडक्सन ट्रेड शो नेपाललाई प्रदर्शनीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको उक्त एक्स्पोले आफूमा उत्साह थपेको नेपाल मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष माधव रिजाल बताउँछन् । मेलामा आगन्तुकहरूका लागि प्रवेश शुल्क ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । विद्यार्थीहरूलाई ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ । मेलामा विभिन्न गेम स्टल, फुड स्टल, वाईफाई तथा सेल्फीको मज्जासमेत लिन सकिनेछ ।
एक्स्पोलाई नमुना बनाउने छौं
माधव रिजाल, अध्यक्ष नेपाल मोबाइल वितरक संघ
को उद्देश्य के हो ?
यसअघि अरूले पनि मोबाइल एक्स्पो आयोजित गर्दै आएका थिए । ती सबै मोबाइल व्यवसायभन्दा बाहिरका व्यक्ति थिए । अरूले यसलाई अवसरका रूपमा मात्र लिए । हामीले मोबाइल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न चाहेका छौं । हामी मोबाइल व्यवसायमै संलग्न भएकाले यो एक्स्पोलाई नमुना बनाउनेछौं।
एक्स्पोका विशेषता के–के हुन् ?
हामीले यो एक्स्पोमा नयाँ आउन लागेका मोबाइल तथा ती मोबाइलमा पाइने सुविधा एवं नयाँ–नयाँ एप्सहरूका बारेमा जानकारी गराउनेछौं । उपभोक्ताहरूले आफूलाई उपयोगी हुने थुप्रै विषयमा जानकारी बटुल्न सक्नेछन् ।
अहिले मोबाइलको बजार निकै फस्टाएको देखिन्छ । उपभोक्ताहरूले मोबाइल खरिद गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
भन्सार छलेर ल्याइएका सामान नकिन्नुहोला । सस्तो मूल्यमा मोबाइल किन्दा त्यसको ब्याट्री, चार्जर, इयरफोन आदि कमसल हुन सक्छन् । पसलेले वारेन्टी कार्ड दिए पनि कम्पनीले वारेन्टी कार्ड दिएको हुँदैन । यसरी लुकीचोरी आएका सामान बिग्रिए भने कम्पनीले मर्मत गरिदिँदैन । मोबाइल खरिद गर्दा भ्याट बिल तथा कम्पनीको वारेन्टी कार्ड लिनुपर्छ ।
मोबाइल बजारमा कत्तिको नाफा छ ?
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढी छ । उपभोक्ताहरूले राम्रा सामान पाइरहेका छैनन् । उपभोक्ताले सस्तो खोज्छन्, तर ठगिइरहेका छन् । सस्तो सामानका पार्टपुर्जा टिकाउ हुँदैनन् । समग्रमा यो व्यवसाय नाफामै छ ।
संघका थप योजना के–के छन् ?
यसपछि हामी पोखरा, हेटौंडा, इटहरी, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी आदि सहरमा यस्तै एक्स्पो आयोजित गर्दैछौं । त्यसमा क्षेत्रीय संस्थाहरूले हामीलाई सघाउनेछन् ।
प्रकाशित :पुस ३, २०७३
अटो शोका आकर्षण भाद्र ११, २०७६
चित्रकलामा चराहरु श्रावण १९, २०७६
क्यारिकेचरमा देखियो सेलिब्रेटीहरूको अनौठो रूप असार ११, २०७६
वृत्तचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव कार्तिक २६, २०७४
अटो शोमा नयाँ बाइक भाद्र २१, २०७४
पुराना नोटको प्रदर्शनी असार ३१, २०७४
विराट एक्स्पो सम्पन्न फाल्गुन २०, २०७३
वेशभूषा प्रदर्शनी सम्पन्न जेष्ठ ३२, २०७२
विश्वकै लोकप्रिय प्रविधि प्रदर्शनीहरू माघ १६, २०७१